Indlu erentwayo yi-465 m2
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLana
Ukurenta i-cottage ekhululekile 465 m2 kuhola wendlela yaseDmitrovskoe, engekude neendawo zokungcebeleka ze-ski zaseSarochany, Kufuphi noluhlu lokudubula lwaseLisya Nora, kumgama wokuhamba we-canal yaseMoscow, ihlathi.Indlu inezifudumezi eziphambili, igesi, ikhitshi, amagumbi okulala. Indawo yeBarbecue. Indlu ineebhiliyoni zaseRashiya, i-tennis yetafile, ikhitshi enazo zonke izixhobo eziyimfuneko, i-dishwasher, umatshini wekhofi, i-oven.Indlu inendawo yokubasa iinkuni. Izitya zezidlo, ilinen inikezelwa. Ukupaka iimoto ezisi-8. Ukuhlamba isiRashiya.
I-cottage ilungiselelwe ukuphumla okukhululekile kunye nokwamkelwa kweendwendwe ezivela kwisibini esitshatileyo ukuya kwi-16-18 abantu, kunokwenzeka kunye nabantwana. Kunokwenzeka ukubamba iidili, imitshato emincinci. Indlu yokuhlambela yaseRashiya
Indlu ifumaneka kufuphi nehlathi, kumgca wesibini ukusuka kwi-Reservoir, kwisithili saseDmitrovsky esicocekileyo kwingingqi yaseMoscow, ukuhamba ngemizuzu emithathu ukusuka kwindlu yi-eco-yard ene-bath complex, echibini layo lokuloba. , izilwanyana zimelwe: amaxhama, amarhanisi, iinkuku, iikalakuni, imivundla ... Kukho iiholide zeski kufutshane: Yakhroma, Sarochany. Ukuhanjiswa kokutya kwi-cafe kuyafumaneka.
Umbuki zindwendwe ngu- Lana
Ndihlala ndinxibelelana, ndiphendula imibuzo kwaye ndinokunika uncedo